राजा फालेर आएको गणतन्त्रले देउवा, प्रचण्ड र ओलीहरुलाई मात्रै फाइदा भयो देशलाई भएन
गत साता कंलकी चोकमा रङ लेनबाट मोटरसाइकल चलाएको भन्दै निर्घात कुटपिट गरेको दृश्य देखाएका थियौं । फेरी ट्राफिक प्रहरीकै अर्काे घटना । सुर्खेतमा त सर्वसाधारणलाई दुख दिएर ट्राफिक प्रहरी आफै तास खेल्दा रहेछन् । अति नै भएपछि शुक्रवार हाम्रा दर्शक विनोद सिंह विष्ट मोवाईलको क्यामेरा अन गरेर सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगे । ट्राफिक प्रहरीहरु बर्दी लगाएर मस्त तास खेलिरहेका छन् । खासमा स्थानिय ग्यारेजवाला मोन्टु भन्ने व्यक्तिले मोटरसाइकलको साइलन्सर मोडिफाइ गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले उन्लाई हिरासतमा लिएको थियो । यिनै व्यक्तिलाई छुटाउन जाँदा स्थनिय विनोद सिंह बिष्टले यो भिडियो खिचेका हुन् । कार्यालयमा तास खेल्ने हवल्दार प्रविण थापा, हवल्दार नरेश खत्री र सिपाही ज्ञान बहादुर बि.क. हुन । साथै मोन्टुलाई छुटाउन ट्राफिक प्रहरीले उनिसँग पैसाको बाग्रेनीङ नै गरेका रहेछन् । विष्टका अनुसार ट्राफिक हवल्दार प्रविण थापाले ५ ओटा हजारका चिट काटे छुटाइदिने भनेका थिए ।
यती मात्रै हैन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाहिर ट्राफिक प्रहरी खेमराज खत्रीले आँफुहरु पैसाको लागि जे पनि गर्ने बताएका छन् साथै मोन्टुलाई एक छिन् चेतावनी हुने र आँफुले शहीसापलाई भनेर छाडिदिने बताए । यति मात्र होईन यो विष्टले यो भिडियो फेसबुकमा हालेपछि ट्राफिक प्रहरीले धम्क्याउने तर्साउन गरेको उन्को भनाई छ । शुक्रवार बिहान त ट्राफिक हवल्दार प्रविण थापाले उन्को घरमै आएर धम्मी दिए । विमानस्थलमा रहेको श्रमको छाप लगाउने डेक्समा कर्मचारी हुदैनन् – श्रम कार्यालय मात्र होईन विमानस्थलमा रहेको श्रम डेक्सको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शुक्रवार राती १२ बजेको बतनिया एयरलाईन्सबाट कतार जान लागेको नवलपरासीका राजन लम्साल १० बजेर २० मिनेटमा विमानस्थलमा रहेको श्रम काउन्टरमा पुगे । त्यहाँ कोही कर्मचारी थिएन्न् । उनी भित्र त छिरे तर बोडिङमा श्रमको स्टम्प नभएपछि उन्लाई रोकियो र उन्को प्लेन छुट्यो । राजनको यो गुनासो आएपछि हाम्रो टिम बिमानस्थल पुग्यो । हामीले राजनलाई लगेर श्रमको डेक्स राखिएको श्रमको कार्यालयमा पुग्यौ । हामी पुग्दा सवा दुई बजेको थियो । १३ जना कर्मचारी रहेको श्रम डेक्सको कार्यालयका ईन्चार्ज अनुज गौतम कार्यालय पुगेका थिएन्न् । हामीले सम्पर्क गरेपछि पनि उनले अझै ४५ मिनेट लाग्ने बताए । त्यसको एक घण्टा पछि हाम्रो भेट त्यहाका ईन्चार्ज अनुज गौतम र उनको टिमसंग भयौ । गौतमसहित शुक्रवार राती डिउटीमा खटिएका योगेन्द्र अधिकारी र शिवओम पुडासैनि पनि त्यही भेटिए ।
शुक्रवार राती खटिएका कोही कर्मचारी ८ बजे नै घर गएका थिए भने केही त्यपछि । शुरुमा त उनिहरुले आफुहरु साढे १० बजे सम्म कार्यालयमा रहेको बताए तर हामीले अन्य प्रमाणहरु देखाएपछि उनिहरुले आफ्नो गल्ती स्विकार गरे । १३ जना कर्मचारी रहेको यो कार्यालय केही पनि सिस्टममा छन् । कर्मचारीले हप्ताको एक दिन कार्यालय आएर सही गरेपनि कसैले थाहा पाउदैन् । समय त उल्लेखनै गरिदैन् । अन्तयत कर्मचारीहरुले राजन लम्साललाई बिदेश पठाउने प्रतिवद्धता जनाए । जसमा मेनपावरले पनि सहयोग गर्ने बताएको छ ।
फेरी श्रम कार्यालयका कर्मचारी २ लाख ३४ हजार घुससहित रंगेहातपक्राउ -बैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको श्रम कार्यालय ताहचलका कर्मचारीहरुले खुलेआम घुस लिएको हामी देखाउदै आएका छौँ ।सेवाग्राहीलाई सजिलै हुने काममा अवरोध देखाएर कर्मचारीहरु पैसा असुल्ने गरेका छन् । शुक्रवार फेरी श्रम कार्यालय ताहाचलमा कार्यरत नायवसुब्बा खगेन्द्रसाद गौतम २ लाख ३४ हजारघुस सहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । सेवाग्राहीबाट २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ घुस लिइरहेको बेला अख्तियारको टोलीले नायव सुब्बा खगेन्द्रप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको हो , कतार जाने युवाहरुसंग घुुस मागेपछि उनिहरुका उजुरीको आधारमा गौतम गोगंबुको एक एक रेस्टुरेन्टमा सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् ।
उनि आफ्नो भागमा १२ हजार मात्र पर्ने बताउँछन् । यस अघिश्रम कार्यालय ताहचलमा सिधा कुरा टिमले गरेको स्टिङ अपरेसनमा कम्युटर अपरेटर भाग्य नारायण झादलालहरुको सेटिङमा सेवाग्राहीसंग पैसा लिने गरेको प्रमाण हामीले भेटाएपछि उनले आफ्नो मोवाईल यसरी पालेका थिए । उनले पनि कार्यालयका सवै कर्मचारीहरुलाई भागपुग्ने भनि स्विकारेका थिए । यस्तै हामीले गरेको अर्काे स्टिङ अपरेसनमा श्रम कार्यालय ताहचलकै सुब्बाराजेन्द्र पौडेलले जापान जाने युवाहरुसं १६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको देखायौ । उनले हाम्रो कार्यालयमै आएर घुस फिर्ता गर्दै श्रम कार्यालयका सवै कर्मचारीहरुले घुस लिने गरेको स्विकारेका थिए ।
अस्ती सल्लाह भयो अनिआज सँगै भनेर उहाँहरुले यहाँ आए पैसा दिनुभयो अझ के कति लाग्छ तँपाईहरुले बाँकी रहेको फिर्ता पाउनुहुन्छ । यो मैले बाँड्दा १०/१२हजार आउँथ्यो । न्युजट्वान्टीफोरबाट
प्रचण्ड माधवको हड्ताको खबर, अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले के गर्छन् अब ? राजा स्विकार्न सकिने विषय जोडेर मन्त्रीले प्रचार गरे, देश कता जाँदैछ ? हेर्नुहोस माघ २२ गतेका मुख्य समाचारहरु